February 11, 2021 - Padaethar
ချစ်သူမိန်းကလေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကောင်လေးတွေရင်ထဲမှာ တိတ်တခိုး ရှိနေတတ်တဲ့ အရာ(၅)မျိုး
ခဈြသူမိနျးကလေးနဲ့ ပတျသတျပွီး ကောငျလေးတှရေငျထဲမှာ တိတျတခိုး ရှိနတေတျတဲ့ အရာ(၅)မြိုး မိနျးကလေးတှကေ ခဈြသူရတဲ့အခါ အခဈြရေးအတှကျ အိပျမကျ မကျထားတာတှေ၊ ဖွဈခငျြလာမိတဲ့ အရာတှနေဲ့အပွငျ ကိုယျ့ကောငျလေးနဲ့ ပတျသတျတဲ့ သဘောထားတှလေညျး ရှိနတေတျကွပါတယျ။ ဒီလိုပဲ ကောငျလေးတှကေလညျး ထုတျမပွောကွပမေယျ့ ကိုယျ့ခဈြသူကောငျမလေးနဲ့ ပတျသတျတဲ့ သဘောထားလေးတှေ ရှိနတေတျပါတယျ။ သူတို့ ရငျထဲမှာတော့ ဒီလို ဆန်ဒလေးတှေ ရှိနတေတျကွပွီး အပွငျကို ထုတျပွတာမြိုး သိပျမရှိပါဘူးနျော။ အကုနျ ဖွညျ့ဆညျးပေးခငျြတယျ ကောငျလေးတှကေ ခဈြရတဲ့ ကောငျမလေး ပါးစပျက လိုခငျြတယျလို့ ပွောသမြှကို အကုနျ ဖွညျ့ဆညျးပေးခငျြတတျကွတဲ့သူတှေ ဖွဈပါတယျ။ ခဈြသူမိနျးကလေးတှကေတော့ လကျဆောငျတှကေို မပေးတာမြိုးက စိတျထဲ မရှိလို့လို့ အထငျလှဲတတျကွပမေယျ့ ကောငျလေးတှကေ တကယျတော့ အကုနျ ဖွညျ့ဆညျးပေးခငျြတဲ့သူတှေ ဖွဈနတောမြိုးပါ။ မတတျနိုငျတဲ့ … Read more
သင့်ကို ဆွဲစားဖို့ သက်သက်သာလာတွဲနေ့တဲ့ ဘဲတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၅)ချက်
သင့်ကို ဆွဲစားဖို့ သက်သက်သာလာတွဲနေ့တဲ့ ဘဲတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၅)ချက် ခုခေတ်မှာ တစ်ချို့သော ယောက်ျားလေး တွေဟာ မိန်းကလေးတွေကို တဏှာစိတ် သက်သက်နဲ့ သာ တွဲတတ်ကြ ပါတယ် ။ ဒီလို ယောက်ျားလေးတွေဟာ တကယ်ကို ယုတ်ညံ့ပြီး အောက်တန်းကျ သူတွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလို လူမျိုးတွေကို ပတ်သက် မိနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ အနေနဲ့ အမြန်ဆုံး နောက်လှည့် သင့်ပါ တယ်။ သူတို့ရဲ့ အကျင့် စရိုက် တွေကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါ တယ် နော် ။ (1) သူဆက်သြယ္တဲ့ပုံစံ သင့်ကို တဏှာစိတ် သက်သက်ကြောင့် တွဲနေတဲ့ သူဟာ သင့်ကို ဆက်သွယ်တဲ့ အခါမှ တဏှာစိတ်နဲ့ … Read more
အမျိုးသမီးများ အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးမိပြီဆိုရင် ကြောက်စရာကောင်းပြီး ရှောင်ရှားသင့်သော ယောက်ျားများ
ရညျးစားတဈထောငျ၊ လငျကောငျတဈယောကျ ဆိုတဲ့ စကားပုံ ကွားဖူးပါတယျ။အမြိုးသမီးမြား ရညျးစားတဈထောငျထားရမယျလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ဒါပမေဲ့ အမြိုးသားတဈဦးရဲ့ အကွောငျးကို ကောငျးကောငျးမသိသေးခငျမှာ အခဈြကို ယုံပွီး ဘဝကို မပုံအပျသငျ့ပါဘူး။အခဈြဦးဆိုတာ ရုပျရှငျထဲမှာ ဇာတျလမျးထဲမှာ အလှနျလှပသလောကျ တကယျညားသှားရငျ သာယာတာက နညျးပါတယျ။ ဘယျလိုယောကျြားမြိုးကို အိမျထောငျဘကျအဖွဈရှေးခယျြသငျ့ပါသလဲဆိုတာ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ အကွိုကျခငျြးမတူကွပါဘူး။ဒါပမေဲ့ အောကျပါအကငျြ့မြားငွိစှနျးနတေဲ့ ယောကျြားမြားကိုတော့ အိမျထောငျဘကျရှေးခဲ့ရငျ ရှောငျရှားသငျ့ပါတယျ။၁။ ကပျစေးနှဲလှနျးတဲ့ ယောကျြား အရပျစကားနဲ့ နှပျခြေးလို့လညျးချေါတာကွားဖူးပါတယျ။ဒီလိုယောကျြားမြိုးနဲ့ အတူတူ ဆိုငျမှာ တဈခုခုစားရငျ ပိုကျဆံပေးဖို့ လကျတှနျ့တတျတာကို တှရေ့တတျပါတယျ။ သူဟာဘယျလောကျခမျြးသာတယျ။ ဘယျလို Brand တှကေို ဝတျဆငျတယျ စသညျဖွငျ့ သိသိသာသာဖွဈဖွဈ၊မသိမသာဖွဈဖွဈ ကွှားတတျပမေဲ့ ပိုကျဆံရှငျးရပွီဆိုရငျ မသိသလို နတေတျတဲ့ ယောကျြားမြိုးဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမြိုးယောကျြား ရှောငျရှားသငျ့ပါတယျ။ ၂။ သံသယ … Read more
အသံဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တောင်းပန်တယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ မလုံလောက်ဘူးလို့ဆိုလာတဲ့ ယုန်လေး
အသံဖိုင်က ကျွန်တော့် အသံပါ ဝန်ခံပါတယ် ကျွန်တော် တောင်းပန်တယ် ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ မလုံလောက်ဘူး …. ဘယ်လို စကားလုံးမျိုးမှ မရှိဘူးဆိုတာ သိပါတယ် ခင်မျာ…. ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း အရင်းတွေကြီးပဲ ရှိတဲ့ Group Chat မှာ . အားလုံး ထင်မြင်ချက်ကို ပြောကျတယ် …. ကျွန်တော့်ကို လည်း ပြောပါ ဆိုတဲ့ အတွက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောပါဆိုတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်ပြောမိလိုက်ပါတယ် … အဲ့ထဲက တစ်ယောက်က လိုက်ဖြန့်လိုက်တာပါ …မလုပ်သင့်ဘူး … အရှေ့က သီချင်းကိစ္စထဲက စာသားနဲ့ ပြည်သူတွေ ဝိုင်းမုန်းနေတဲ့ အချိန် ကျွန်တော့်ကို လူသတ်ကွင်းထဲ ထပ်ပိုလိုက်တာ …. အဲ့သူငယ်ချင်း မလုပ်သင့်ဘူးလိုထင်ပါတယ် …ကျွန်တော် … Read more
11.2.2021 မှ 17.2.2021 အထိ ၇ရက်သားသမီးများ တစ်ပတ်စာ အထူးဟောစာတမ်း
11.2.2021 မှ 17.2.2021 အထိ တစ်ပတ်တာ ၇ရက်သားသမီးများ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ယခုအပတ်အတွင်း ငွေကြေးကုန်ကျမှုများ အလွန်များပြားနေလိမ့်မည်။ စုဆောင်းထားသော ငွေကြေးများ ရုတ်တရက်သုံးစွဲရခြင်းများကြုံမည်။မထင်မှတ်ဘဲခရီးတွေထွက်ရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ပြောင်း၊အိမ်ရွှေ့ကိစ္စများ ဒီအပတ် အတွင်းကြုံနေရတတ်ပါတယ်။ မိဘ၊အကြီးအကဲကျန်းမာရေးအညံ့များကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင် ရဲ့ကျန်းမာရေးကတော့ထင်သလောက်အညံ့အဆိုးမရှိနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆောင်ရွက်လိုသော ဆန္ဒမရှိသည့် ကိစ္စရပ်များကို တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ရခြင်းများ ရှိနေမည်။ တစ်ပါးသူကတိပျက်၍ အလုပ်ကိစ္စများ ထင်သလောက် တိုးတတ်မှုမရှိနိုင်ပါ။အခြားနေရာဋ္ဌာနများမှာ ယာယီတာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးရတတ်ပါတယ်။ ဒုက္ခများနေတဲ့မိတ်ဆွေ တွေကို လူအားကိုယ်အားနဲ့ကူညီပေးရတတ်ပါတယ်။ တစ်ခုသတိထားရမှာက ဆရာတင်မှားတတ်ပါတယ်။ အရေး ကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ဒီကာလအတွင်းချမှတ်လို့မကောင်းသေးပါဘူး။အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ချိန်းဆိုထား တာတွေလွဲရတတ်ပါတယ်။ ချစ်သူခင်သူတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လို့မရတတ်ပါဘူး။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ထင်သ လောက်ညံ့နေတာမျိုးမရှိပါဘူး။ အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ တိုင်တိုင်ပင်ပင်ရှိမယ့်ကာလတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေး မှာတော့ ပညာသစ်တစ်ခု စတင်သင်ယူလို့မကောင်းသေးပါ။ အကျိုးပေးဂဏန်း..၅/၆/၈ အထူးဟော… အလုပ်များကိစ္စများနေမည်။ ယတြာ…အောင်သပြေပန်းဘုရားကပ်လှူလိုက်ပါ။ … Read more